Ukulandela iinkumbulo ezibanjwe yimizimba yethu --- Kwindlela yeenkumbulo eziqulethweyo · Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
UMnyhadala woBugcisa oziqulethweyo
Ukulandela iinkumbulo zemizimba yethu - kwindlela yeenkumbulo eziqulethweyo
Phezolo siqale UMBhiyoZO WOBUGCISA OBUMISELWEYO. Umsitho wokuvula uqale ngokucamngca kukhokelwa nguNane Kahle ukusidibanisa sonke kuwo onke amanqanaba. UMadhumita Nandi wase-Oyoun, u-Louna ogobele u-Abdelmoula Sbou no-Dami Choi emva koko baxoxe ngezimvo kunye neenkqubo ezisemva kwengqwalaselo yethu yezolondolozo.
Simeme abagcini ababonisa umsebenzi wabo ngexesha lomnyhadala ukuba babelane ngeevidiyo zokwazisa ukuze singene nzulu kwizihloko kwaye saziswe ngeeprojekthi nabantu abasemva kwabo:
Zeziphi iinkumbulo ezibanjwa yimizimba yethu? Inokusixelela ntoni imizimba yethu ngathi, ngokudlula kwethu kunye nekamva lethu? Siyakumema ukuba usijoyine kuphononongo lobuchwephesha lwale mibuzo kunye neminye emininzi ngexesha LOMCIMBI WOBUGCISA OBUMISELWEYO. Sinokudlala okungama-20 +, ukuvavanywa kwefilimu, iingxoxo kunye nongenelelo ngoncedo olucwangcisiweyo. Fumana ulwazi oluthe kratya kwi Isikhokelo somthendeleko.
Sisebenzisa ubugcisa njengesixhobo esihamba sikhangela iimpendulo kwimibuzo enjengale: Siziqhekeza njani iindlela zokuya exesheni, malunga nemigaqo yesini, malunga nezesondo, malunga nokufa nokuzila? Singakwenza njani ngokudibeneyo ukuphilisa umothuko? Imizimba yethu ingayiguqula njani isuke kwinto ephethe izithintelo zentlalo ibonakalise imizimba ephilayo? Ivela phi intiyo, isisichaphazela njani, kwaye ithatha yiphi indlela ukusuka kwintiyo ukuya kwintiyo?
Landela imilambo apha:
UMnyhadala woBugcisa oziqulethweyo, i-vernissage